Ọrụ nyocha - Shang Hai Tongke Flow Technology Co., Ltd.
Ndụmọdụ TKFLO maka ihe ịga nke ọma gị
TKFLO dị n'aka iji nye ndị ahịa ya ndụmọdụ na ajụjụ niile metụtara nfuli, valves na ọrụ. Site na ndụmọdụ na ịhọrọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka mkpa gị na ọtụtụ mgbapụta na valvụ họrọ.
Anyị nọ n'ebe ahụ maka gị - ọ bụghị naanị mgbe ị bịara ịhọrọ ngwaahịa ọhụrụ kwesịrị ekwesị, kamakwa n'oge ndụ niile nke nfuli na sistemụ gị. wo ọkọnọ akụkụ ahụ mapụtara, ndụmọdụ maka ndozi ma ọ bụ ndozi, yana Energy ịzọpụta ntaghari ohuru nke oru ngo a.
TKFLO si ọrụaka consultancy ọrụ na-enye onye ngwọta iji hụ na kacha ọrụ nke nfuli, valves na ndị ọzọ na n'usoro akụrụngwa. Mgbe ị na-eme nke a, TKFLO na-elele sistemu mgbe niile. Ebumnuche atọ a: iji dozie na / ma ọ bụ bulie sistemụ n'ụzọ kwekọrọ n'ọnọdụ na-agbanwe agbanwe, iji nweta nchekwa ego yana ịbawanye ndụ ọrụ nke ngwa ọrụ na-agagharị niile.
N'iburu n'uche usoro ihe niile, ndị injinia TKFLO na-agbasi mbọ ike ịchọta azịza kachasị akụ na ụba. Site mmezi na iji pụrụ iche mepụtara ihe, retrofitting agbanwe ọsọ usoro ma ọ bụ dochie igwe, anyị na-arụ ọrụ ọnụ na ndị ahịa ịzụlite onye ngwọta. Ha na-amata ụzọ kachasị mma maka ịmegharị usoro iji gbanwee ọnọdụ, ọ bụrụ na mpaghara teknụzụ ma ọ bụ mgbanwe na iwu.
Nka na ụzụ ndụmọdụ: ịdabere na ahụmịhe na etu esi aga
TKFLO si technical consultancy ọrụ maka nfuli na ndị ọzọ n'usoro ngwá nwere ihe mgbaru ọsọ atọ:
A. Usoro njikarịcha
B. Ike nchekwa
C. Ogologo ọrụ ọrụ nke ngwaọrụ na-agbanwe agbanwe nke ọ bụla
1. Iji hụ kacha ahịa consultancy, TKFLO si ọrụ ọkachamara enweta na etu esi nke niile TKFLO ọkachamara ngalaba, si Engineering ka Production.
2. Mgbanwe nke ọsọ iji nweta akara mgbapụta kacha mma maka usoro dị iche iche chọrọ
3. Mgbanwe nke sistemụ hydraulic, dịka ọmụmaatụ, site na ịkwado ndị ọhụrụ na-agbasa ma na-agbasa
4. Iji ihe ndị emepụtara n'ụzọ pụrụ iche iji belata eyi
5. Dabara adaba nke okpomọkụ na sensọ vibration iji nyochaa ọrụ na ọnọdụ - na arịrịọ, enwere ike ịnyefe data na ntanetị
6. Ojiji nke teknụzụ biarin oge a (nke a na-ete mmanụ) maka ogologo ndụ ọrụ
7. Uwe mkpuchi iji melite arụmọrụ
8. Uru nke ndụmọdụ ụlọ ọrụ maka nfuli na akụrụngwa ndị ọzọ na-agagharị
9. Chekwa ume site na ịkwalite arụmọrụ
10. Mbenata CO2 anwuru site na ịchacha usoro
11. Nchebe na ntụkwasị obi site na nlekota na ịchọpụta ihe ndị na-ekwekọghị na mmalite
12. Sachekwa ego site na ndụ ọrụ ogologo oge
13. Ngwọta Bespoke maka ihe ndị mmadụ chọrọ na mkpa ha
14. Ndụmọdụ ọkachamara dabere na etu esi emeputa
15. Ozi banyere ịbawanye arụmọrụ ike nke sistemụ.